Ifa lika-Albertina Sisulu
U-Albertina Sisulu, owaziwa ngokuthi uMama weSizwe noma uMa Sisulu, uyaziwa ngokuba ngumshushisi waseNingizimu Afrika olwa nobandlululo kanye nomfazi kaWalter Sisulu.
Uyaziwa ngekhono lakhe lobuholi kanye namandla obumama amthatha ekuqaleni okuthobekile eTranskei ukuba abe omunye wezithombe ezihlonishwa kakhulu nethonya eNingizimu Afrika. Ukugcina isimo sakhe esithulile nesingenasidingo ngenkathi futhi eqinile futhi eqina iminyaka eminingi ehlukunyezwa kumenza abe omunye wabesifazane ongavamile abafanele sibagubhe. Lowo owayengumongameli uJacob Zuma wamchaza ngokuthi 'insika yamandla hhayi kuphela emndenini wakwaSisulu, kodwa futhi nayo yonke impi yokukhululwa, njengoba ekhulisa, weluleka, wahola futhi efundisa iningi labaholi kanye nabasunguli beNingizimu Afrika yentando yeningi’.
USisulu ubelokhu ehambisa inkumbulo kathisha wesikole owamtshela; “Ukuziphatha kwakho kungumfundisi ongcono kakhulu. Kunamandla kunanoma yini oyishoyo.” Uma sahlulela ukuziphatha kukaSisulu, akumangalisi ukuzwa ukuthi la mazwi amkhusela. Ifa lakhe likhona emkhakheni womzabalazo omude nobunzima. Unendawo ekhethekile yodumo phakathi kwabaholi baseNingizimu Afrika. Ngaphambi komzabalazo, yena nomndeni wakhe bahlukunyezwa ezandleni zobuhlanga wobandlululo.
Ngakho konke lokho ahlala ezinikezele futhi enqabe ukwesatshiswa. "Zama ngangokunokwenzeka, abakwazanga ukuphulukisa umoya wakhe, abakwazanga ukumenza abe nolaka, abakwazanga ukunqoba uthando lwakhe," kusho uMbhishobhi uDesmond Tutu.
U-Albertina noWalter Sisulu
U-Albertina Thethiwe waqala ukuhlangana noWalter Sisulu ngesikhathi esebenza eJohannesburg General Hospital ngo-1941....more
u-Albertina Sisulu - Imisebenzi eyengeziwe yezombangazwe
Phakathi nawo-1950 u-Albertina waba yingxenye ebalulekile ye-Federation of Women of South Africa. Wayengaphambili ekulweni nokuhlukunyezwa ngokobulili nokuhamba njengombhikishi ngokumelene nemithetho yamapasi....more
U-Albertina Sisulu - Ukuhlonishelwa Iminyaka Yokusebenzela
U-Albertina Sisulu ungomunye wabantu abahlonishwa kakhulu emlandweni waseNingizimu Afrika....more
U-Albertina Sisulu: Umama wesizwe
Ngemuva kokuba u-Albertina washada noWalter, wagxila ezinxusweni zakhe zezombangazwe. Ngesikhathi ecashile eyohamba noMkhonto WeSizwe (iphiko lezempi le-ANC) waba ngumnakekeli womndeni....more
U-Albertina Sisulu - Impilo Yeqhawekazi
Wazalwa nguBonizwe engu Monikazi Thethiwe Ngo-21 Mfumfu 1918, esifundeni saseTsomo seTranskei, uNontsikelelo Thethiwe wayengowesibili kwezingane ezinhlanu....more
U-Albertina Sisulu - Umsebenzi weNingizimu Afrika Ekhululiwe
U-Albertina Sisulu akazange ahlanganyele ezombusazwe kwaze kwaba ahlangane noWalter ngo-1941. Ikhaya lakwaSisulu laba indawo yokuhlanganelana ndawonye okwabumba i-ANC....more